IR Iran ट्रेण्डिङ्ग
विश्वकपको समूह ‘बी’बाट स्पेन, पोर्चुगल र इरानमध्ये को बाहिरिएला !
काठमाडौं । विश्वकपको समूह ‘बी’का दुई–दुई खेलहरु सकिएको छन् । विश्वकप उपाधिको दावेदार राष्ट्र स्पेनले इरानलाई बुधबार राति पराजित गरेसँगै दास्रो चरणका खेलहरु सकिएका छन् ।
स्पेनले १ शुन्यले हरायो इरानलाई
बुधबार सांझ स्पेनले एशियाली राष्ट्र इरानलाई १ शुन्यको को गोल अन्तरले हरायो ।
एशियाली राष्ट्र इरानको सामना गर्दै युरोपको स्पेन
काठमाडौं । आज राति विश्वकपको समूह चरणको दोस्रो चरणको खेलमा इरानले स्पेनको समाना गर्दैछ । समूह ‘बी’मा इरानले मोरक्कोलाई पराजित गरेर ३ अंक जोडिसकेको छ भने पोर्चुगल र स्पेनको १–१ अंक रहेको छ ।
अन्तिम मिनेटमा मोरक्कोलाई नमिठो झट्का, इरानलाई काइदा
एजेन्सी, १ असार । रसियामा जारी विश्वकपमा अन्तिम मिनेटमा मोरोक्कोका खेलाडी अजिज बहुहाडडोजले आत्मघाती गोल गर्दा इरान १-० गोलले विजयी भएको छ ।
के एसियाली राष्ट्र इरानले मोरक्कोलाई पराजित गर्न सक्ला ?
काठमाडौं । आज साँझ पौने ८ बजे दुई खेलहरु हुँदैछ । दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र मोरक्कोले एसियन राष्ट्र इरानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । इरान फिफा वरियताको ३७ औं स्थानमा रहेको छ भने मोरक्को ४१ औं स्थानमा रहेको छ ।